समाचार-के तपाइँ अझै पनी विषाक्त र हार्ड-टू-डिग्रेड प्लास्टिक उत्पादनहरु को उपयोग गरीरहनुभएको छ?
के तपाइँ अझै पनी विषाक्त र हार्ड-टू-डिग्रेड प्लास्टिक उत्पादनहरु को उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
बायोडिग्रेडेबल सामग्री के हो? तपाइँ निम्न जान्न आवश्यक छ। यदि तपाइँ दिगो र नवीकरणीय खाद्य प्याकेजि्ग को अनुसन्धान गरी रहनुभएको छ, तपाइँ मकई स्टार्च र PBAT मा आधारित बायोडिग्रेडेबल सामग्री को बारे मा सुन्नुभएको हुन सक्छ। बायोडिग्रेडेबल घरेलु फोहोर झोला वर्तमान मा सबैभन्दा पर्यावरण अनुकूल विकल्पहरु मध्ये एक हो। यो धेरै प्रयोगहरु छन् र हरेक परिवारले यसलाई प्रयोग गर्नेछन्। Longjun Tianchun पर्यावरण संरक्षण कं, लिमिटेड को विकास र यो दुनिया भर मा प्रयोगकर्ताहरु लाई आपूर्ति गरीएको छ।
मकई स्टार्च-मकई स्टार्च बाट बनेको मोल्ड फाइबर प्याकेजि मकै बाट आउँछ। फाइबर पानी संग मिसिन्छ जब सम्म उनीहरु एक लुगदी बनाउँछन्। लुगदी रूपान्तरित हुन्छ (दबाव र तताउने द्वारा) विभिन्न मोल्डेड फाइबर उत्पादनहरु मा, जस्तै हाम्रो बायोडिग्रेडेबल पालतू कचरा बैग मा।
साधारण प्लास्टिक झोलाहरु विघटन गर्न २०० बर्ष वा सो भन्दा बढि चाहिन्छ। यसले भूमिलाई प्रदूषित गर्दछ र गैर-नवीकरणीय स्रोतहरु बाट बनाइन्छ। साधारण प्लास्टिक झोला अझै पनी हाम्रा महासागरहरुमा अवस्थित छ वा हाम्रा पार्कहरु र फुर्सत को ठाउँहरु भर्न।
पुरा तरिकाले biodegradable- दुबै सामाग्री समय को साथ स्वाभाविक रूप मा नीच हुनेछ। मकई स्टार्च बाट बनेको बायोडिग्रेडेबल घरेलु फोहोर झोलाहरु गैर-डिग्रेडेबल प्लास्टिक झोलाहरु लाई प्रतिस्थापन गर्न को लागी आदर्श वातावरण मैत्री उत्पादन हो।
Biodegradable प्लास्टिक झोलाहरु पुरा तरिकाले degradable छन्। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बिरुवाको भुँडा बाट बनेको बस्तु हो जुन मानव शरीर र वातावरण को लागी अनुकूल छ। तिनीहरू तीन प्रमुख सिंथेटिक प्लास्टिक बाट फरक छन्। खारेज गरिसकेपछि, उनीहरु जैविक वातावरण को कार्य अन्तर्गत आफैंले विघटित गर्न सकिन्छ। यो मान्छे वा वातावरण को लागी हानिकारक छ र हरियो प्याकेजि to्ग संग सम्बन्धित छ। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक झोलाहरु डिस्पोजेबल शपिंग ब्याग र घरेलु फोहोर झोला को एक प्रकार हो कि "गिरावट र गिरावट गर्न सजिलो" हो।
२०१ Mc म्याकिन्से एण्ड कम्पनी रिपोर्ट अनुसार फाइबर प्याकेजि industry्ग उद्योग उज्ज्वल देखिन्छ।
धेरै प्रमुख खाद्य कम्पनीहरु म्याकडोनाल्ड सहित फाइबर प्याकेजि use्ग को उपयोग गर्ने वाचा गरेका छन्। कम्पनी को लक्ष्य २०२५ सम्म १००% फाइबर प्याकेजि to्ग मा संक्रमण को लागी छ। उपभोक्ताहरु अधिक र अधिक जिद्दी हुँदैछन्, उनीहरुको क्रय शक्ति दिगो हुनुपर्ने माग गर्दै। दिगो प्याकेजि growing्ग बढ्दो माग पूरा गर्न को लागी एक तरीका प्रदान गर्दछ।
Longjun Tianchun पर्यावरण संरक्षण कं, लिमिटेड OEM, ODM अनुकूलित व्यवहार स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, र बिभिन्न ग्राहकहरु को लागी व्यक्तिगत आवश्यकताहरु प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँलाई यो आवश्यक छ, परामर्श गर्न को लागी स्वागत छ।
पोस्ट समय: मई-19-2021